“Waxaana doonayay inaan ka dhuunto adduunkan, kaddib kulankii Liverpool” – Luis Suarez – Gool FM
Ferdinand oo rajo wanaagsan ka muujiyay mustaqbalka Ronaldo ee kooxda Man United
Muxuu ka yiri Mikel Arteta kaddib guuldarradii Arsenal ay kala kulantay kooxda Newcastle?
“Waxaana doonayay inaan ka dhuunto adduunkan, kaddib kulankii Liverpool” – Luis Suarez
(Yurub) 15 June 2019. Weeraryahanka reer Uruguay iyo kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa kasoo hor muuqday saxaafada markii ugu horeysay tan iyo markii ay ku hareen wareega afar dhamaadka Champions League, kaddib guuldaro niyadjab ee 4-0 ah ay kala kulmeen Liverpool.
Luis Suarez ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Fox Sports” ayaa wuxuu ka hadlay sida uu noqday dareenkiisa kaddib markii ay ka hareen tartanka Champions League.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa qirtay in kulankii lugta labaad ee wareega afar dhamaadka Champions League uu ahaa kiisii ugu xumaa taariikhda xirfadiisa kubadda cagta iyo sidoo kale xusuusta koobkii adduunka 2014 ee lagu qabtay dalka Brazil, wuxuuna xusay in guuldrada ay saameyn iyo xanuun ku reebtay ilaa iyo haatan.
“Marna ma rumeysanin in taasi ay dhici karto, waxaan mar walba ku fekeray inaan nahay Barcelona, isla markaana aan awoodi karno inaan gool kaga dhalino koox kasta iyo meel kasta, balse taasi ma aysan dhicin”.
“Maalmihii xigay kaddib guuldaradii Liverpool waxay aheyd maalmihii ugu xumaa xirfadeyda iyo guud ahaanba taariikhdeyda oo dhan, marka lagu daro xusuusta Koobka Adduunka ee 2014, xitaa ma jecleysan inaan kasoo hor baxo caruurteyda”.
“Fikirkeyga wuxuu ahaa mid halis ah waxaana kaliya doonayay inaan ka dhuunto adduunkan” ayuu ugu dambeytii hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Luis Suarez.
Paul Pogba oo kooxdiisa la wadaagay go'aankiisa ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa - kooxdee ayuu doortay inuu ku biiro?
Derby County oo shuruud ku xirtay heshiiska uu Frank Lampard ugu wareegayo Chelsea